what, when, why: लाटोकोसेरो
रामु: ए, हेम तँलाई थाहा छ, संसारमा रात किन पर्छ ?
हेम: सुर्य अस्ताएको कारण होला ।
रामु: ल, तँलाई त अझै थाहा छैन रहेछ ।
हेम: भन न त के हो ?
रामु: लाटोकोसेरोले दिउँसो आँखा देख्दैन नि...त्यसैले...